Chernogolovka (isitshalo): izakhiwo ewusizo, isicelo
Chernogolovka - isitshalo eyaziwa kusukela ezikhathini zasendulo. It lasebenza kuwo wonke amazwekazi futhi esetshenziswa Abelapha eziningi kanye nezinyanga. Okwamanje, Chernogolovka, ngokuba zilwane zasendle ekhula, akalilahlile ukuthandwa futhi isetshenziselwa ukwelapha izifo eziningi ngoba umsebenzi zokwelapha ezibanzi, ocebile amakhemikhali ukwakheka kanye isisekelo seensetjenziswa okwanele. Igama Lesi'Latin (Prunella vulgaris) lingase lihunyushwe ngokuthi "evutha amalahle." Mhlawumbe igama wanikezwa ngenxa yokufana we inflorescence ne amalahle ngomumo imayelana ishabalale.
Heal-bonke isitshalo kungokwalabo ozala Lamiaceae. Isiko linesizotha, akudingi yesondlo, likhula kahle imvelo, esehlanganise phansi nge ukhaphethi izikhwebu eziluhlaza onsomi. Isiqu wakhe oqotho, ephakanyiswe, ramified. Amahlamvu engenhla kukhona sessile, ephansi - petiolate.
I inflorescence kuyinto ovoid noma ukuma side. Siqukethe izindandatho zamanga kumiswa bracts enoboya. ungqimba ngasinye siqukethe izimbali eziyisithupha. inkomishi yabo bilabiate uhlaza noma onsomi. Corollas ngokuvamile onsomi. Ngaphakathi stamens ezine. Imbali yakhelwe ukuze ivikela umpe inqwaba kocingo izinambuzane ezincane, olondolozela yona izinyosi ezithutha impova.
Chernogolovka - isitshalo-bee isitshalo. Kulinganiselwa ukuthi ungakwazi ukuqoqa kusuka ehektheleni elilodwa kuya kwangu-90 kg umpe. Ngemva kokuphothulwa impova beaters abune futhi awe, nqunu izindlebe ngalesi sikhathi ongaqhathaniswa miniature corn ihleza.
Esikhundleni inkomishi stamens Kumiswa ngamunye ezine imbewu-nut. Kodwa yokuzalanisa isiko ukusetshenziswa kwabo akutuseki. lula kakhulu ukwenza impande cuttings, okuyinto ngazivumelanisa nendlela kahle, enika amahlumela eziningi.
Growing, uhlelo impande kahle uthukulula inhlabathi, enikeza ukufinyelela nomoya-mpilo nomswakama, lula kwema- microflora ezuzisayo kukholamu inhlabathi. zom isizini ihlala isikhathi eside, kwezinye izindawo kuthathela ngasekupheleni kwentwasahlobo futhi ingahlala kuze ekwindla afudumele.
Chernogolovka - isitshalo esitholakala ngisho ezindaweni arctic. Ukuthembela ikhula eSiberia, kuyisici esihlupha Ekude eCaucasus. EChina kuyinto evame kakhulu. Engxenyeni maphakathi naseningizimu waseYurophu nase-Asia ukhula kuyo yonke indawo. Ungayithola eNyakatho Afrika nase-America, iJapan, India, Mongolia, Australia.
Kungatholakala ezindaweni ezomile, futhi ezindaweni eziswakeme, emathafeni futhi ngesimo sendawo enezintaba. Sikhula on the imiphetho kwamahlathi, izimfunda, amasimu, imihosha, loMfula emachibini, emifuleni nasemaxhaphozini. Kukholakala ukhula, ungase ungazithukuthelisi izindawo kutshalwa, njengoba ivumela ukuziveza zokutshala kanye ezikhulayo ngobudlova.
Plant njengoba cover emhlabathini ungakheka noma zikhule okwelapha workpiece eluhlaza. It ukhetha umthunzi ngokwengxenye, ikakhulukazi mulchiruemoy ikhula kahle enhlabathini. Ngaphansi kwezimo ezifanele, imbewu ziqhume ngonyaka ofanayo ngo-Agasti, futhi ngo-October kakade kwakhiwa esinezimila rosette. izitshalo Young overwinter ezinhle. imbewu Ungavuli lihluma ukunikeza amahlumela ngoMeyi.
Nakuba Chernogolovka ekondleni izinkomo isicelo nge ukuzibamba, izilwane eziningi Endaweni yazo engokwemvelo, ke adle ngokuzithandela. Kukhona ngisho umbono ukufaka lokhu uhlu izinto ziphephile ukusetshenziswa.
Chernogolovka - isitshalo ukuthi cishe never kusetshenziswa imithi yethu esemthethweni. Ukwakheka kwalo ayiqondakali kahle kahle. Nokho, idatha etholakalayo abonisa izakhiwo zalo okusezingeni eliphezulu zokwelapha, ngenxa yokuba khona izinto eziphila abakhuthele.
Okungenhla-phansi ingxenye isitshalo amumethe flavonoid: quercetin, rutininom, giperozid, kaempferol. Futhi isipho coumarins, saponins, tannins, inhlaka, intukuthelo, amafutha abalulekile kanye acid organic. Kukhona boron, ithusi, manganese, zinc, i-potassium ne eziningi ascorbic acid kanye carotene.
Kakade kwanele ukhulume amathemba ukutadisha izitshalo ukuze ulisebenzise ukudala izidakamizwa.
Procurement of izinto zokusetshenziswa: akwazi ukupholisa amanxeba-bonke
Herb kuvuna ngesikhathi izimbali. Sebenzisa zonke izingxenye zasemoyeni: amaqabunga, sifanamsindvo kanye efihlekile. Ukuze iqoqo of izinto zokusetshenziswa izindawo ezikhethiwe kude Amasimu iphathwa nge yokubulala ukhula, hhayi emigwaqweni kanye sezimoto, ngoba lesi sithombo singakhiqiza buthelela esindayo metal compounds nezinye ezinobuthi.
Indaba eqoqwe kungcono ukusebenzisa fresh. It singasetshenziswa omisiwe emthunzini endaweni umoya kahle bese ugcine sikhatsi lesingaba tinyanga letisitfupha. workpiece isikhathi impahla - kusuka July kuya ku-September.
Chernogolovka Chernogolovki izakhiwo, ukusetshenziswa
EChina nemithi isiKorea, lokhu imbiza isetshenziswa Abelapha njengoba panacea for izifo eziningi. Iqukethe izinto asebenzayo zinqanda ukukhula Escherichia coli sofuba Mycobacterium kanye ne-typhoid fever. Ngenxa yalezi izitshalo bayakwazi cabanga esikhundleni antibiotic. Futhi liyasetshenziswa njengenhlangano antipyretic, hemostatic, antispasmodic futhi sine.
Kunobufakazi womsebenzi namagciwane we kula Chernogolovka. Ikakhulukazi, lolu cwaningo eyenziwa polysaccharide prunelina umsebenzi ngokumelene immunodeficiency virus. Kuye kwatholakala ukuthi izinkomba ngempumelelo ahlukene Retrovir. Eye amaconsi kukhishwe nomphumela omuhle ekwelapheni keratitis ezibangelwa amagciwane.
acid Organic inethonya le ukuzinza hormone obhekene isimo indlala yegilo. A okusezingeni eliphezulu umsebenzi immunomodulating Chernogolovka. Amalungiselelo zalesi sitshalo nomphumela ozuzisayo ku imithambo yegazi, ngaleyo ndlela ngobumnene alawule blood pressure.
Njengoba ezithambile antihypertensive yemvelo futhi isisu ekwelapheni nomfutho wegazi ophezulu esigabeni sokuqala isetjentiswe ngempumelelo Chernogolovka. izitshalo herbaceous kuvuna yomiswa itiye yokuphisa ngefomu okumsulwa noma isetshenziswe njengekhubalo ingxenye amacala. zezinkambi izinto ezinjalo kubonisa nokuthi ewusizo ukususa izilonda emlonyeni ukuvuvukala izinsini.
Kusukela zimbali isithako nomuthi balungisa izinto ezikhishwe. Bangakwazi washayelwa ku yokugcoba, okhilimu kanye lotions for ekwelapheni dermatitis of etiologies ehlukahlukene. Fresh juice okusemathinini, ekukhipheni vodka noma utshwala. Seborrhea kuboniswe ukugeza decoction yamakhambi Chernogolovka. Lapho inflammations ahlukahlukene isikhumba isetshenziswa ukuze ungeze okugeza. Uma namathansela ukumnika emphinjeni hashaza. imbiza Steamed isetshenziswa njengendlela ulwe dandruff.
emazweni ahlukahlukene anezici yabo ngisho ukusetshenziswa isiko zalesi sitshalo. Imbali (Chernogolovka zisetshenziswa) asisetshenzisiwe kuphela ekwelapheni izifo, kodwa futhi ukuvimbela izifo ezihlukahlukene. Ngakho-Cherokee Indian kanye Thompson, sifakwe emanzini kangaki ngamanzi abandayo ukunikeza tonic ezinhle. Amahlamvu asetshenziselwa ukupheka nge imifino ebilisiwe, futhi ifomu omisiwe - njengendlela isithokelo. Juice wagcoba nogologo ukwelapha ubuhlungu bekhanda isetshenziswa ukulunywa yizinambuzane okudambisa ukuvuvukala kanye ekudambiseni isimo. utshani Steamed lasetshenziswa zokushiswa isikhumba.
E-Ireland, kusukela chernogolovok futhi wort ukwenziwa itiye St John sika ukusetshenziswa yezifo kohlelo ezahlukahlukene zenhliziyo. Kukholakala ukuthi ukukhathala isiphuzo ezinjalo, amathoni, upholisa lapho umsebenzi ngokweqile, kunciphisa ukulahlekelwa ngesikhathi ukopha esesikhathini.
Tea chernogolovok newayini akusebenzisa ngempumelelo ukululama ngemva kokugula okwathatha isikhathi eside kangako. ukusetshenziswa entwasahlobo yayo Kunconywa ukuthuthukisa ukungatheleleki kanye ukumelana imikhuhlane umzimba nge amavithamini noma ukuqubuka kwezifo ezithathelwanayo. Umunyu amahlamvu fresh okuqukethwe okusezingeni eliphezulu tannins angasuswa emanzini ane ngamanzi abandayo. I sifanamsindvo nezimbali aqukethe udayi yemvelo ukuthi ubonisa ukusebenza oluhlaza omnqumo.
Chernogolovka sivame ku ngokuqapha futhi ngemuva kokuthintana nodokotela onguchwepheshe ezifanele. Ungakwazi ukuxoxa izinzuzo ezinkulu zalesi sitshalo, njengoba Chernogolovka ezivamile futhi esekhulile kalula isiko. Kulesi inikeza isivuno eliphezulu emvelo izidakamizwa zokusetshenziswa nge high izakhiwo zokwelapha kanye umsebenzi begazi.
Sebenzisa njengoba isitshalo yemvelo kungaba immunomodulator yemvelo kokuba, ngaphezu, impahla ithoni umzimba, ukuhlinzeka kuye hepatoprotective, elwa namagciwane, umphumela anti-inflammatory futhi adaptogenic.
Kanjani izindawo omiyane abazalela?
Kungani izinyoni uthuthe. Yini zinyoni ezifudukayo, futhi yini - ixazululwe
Inyoni enkulu kunazo zonke emhlabeni. Ngubani yena?
Lapho izimoto siqala Russia?
Nezibiliboco elingisa: lokho ukwenze, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka. Indlela ukuhlukanisa wemvelo amaqanda yokufakelwa
Zingaki amahhashi ahlala? Ukunakekelwa nokugcinwa
Amazwe sezenhlalo zomhlaba
Ben-noHure. Ngubani-ke, tshela ifilimu Timura Bekmambetova
Ingane asaba izingane - uma engazimisele autistic?
Kanjani ukwakha sesifufula? Cishe nje eziyinkimbinkimbi
Uma uqala ngokuchofoza, kodwa ukuziqalela akusho ukusonta
Uphi iVersailles? Umlando kanye nezimfihlo ze-Versailles
I-Auto ngaphandle kwemibhalo - eyebiwe noma cha?
Amaqanda ama-Easter in the game - kuyini? Easter amaqanda nge Outlast imidlalo, Minecraft futhi "GTA 5"